LeadSift: Shandisa Kutengesa Zvemagariro Kuwana Mahara | Martech Zone
LeadSift: Shandisa Yemagariro Kutengesa kuti uwane Mahara
Mugovera, Nyamavhuvhu 3, 2013 NeChishanu, Nyamavhuvhu 2, 2013 Douglas Karr
78% Yevatengesi vanoshandisa vezvenhau kutengesa vezera ravo. LeadSift yakaparura gore rayo chikuva chinotarisa mamirioni ehurukuro mumatanho enhau enhau kuti vawane nekuburitsa zvinogona kutungamira kumabhizimusi uku ichipa mumwe nemumwe mutungamiriri metric inoronga chinangwa. Inorerutsa pfungwa yekutengesa munharaunda uye inoita kuti iwe nechikwata chako mubudirire uye mubudirire mukutengesa kwacho nekusanganisa kusanganisa neCRM.
LeadSift inoita kuti zvive nyore nekuendesa zvinotungamira.
Sefa Kuburikidza Noise - LeadSift inowana kutaurirana pane vezvenhau izvo zvakakosha kwauri uye kusefa kunze kwehurukuro dzisinei.
Nunura Unhu Hutungamiri - Leadsift inotarisa kune vashandisi huwandu hwevanhu, psychographics uye nhaurirano iripo kuti uve nechokwadi chekuti kutungamira kwako kwakakodzera.
Shingairira neRakareruka - Ramba uchiteedzera LeadSift inotungamira mune yavo yekudyidzana chikuva uye wirirana navo kuvaka yako mutengi hukama.
Tags: tsvaga inotungamira onlinezvinoisaleadiftmagariro anotungamirapasocial media kuwana